Vidio 7 - Hormone Blockers - Mmetụta Mmekọahụ | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Vidio 7 - Mmekọahụ Hormone - Mmekọahụ
Ndị Hormone Blockers - Mmetụta Mmekọahụ / Site mere
Video 7- Dysphoria nke nwata.
Mmetụta Mmekọahụ nke Hormone Blockers.
Okwu a bụ na GnRH anọghị na ohere ahụ, mana o nwere anyụike na ntụzị ndị ọzọ. Ọ na-eme ihe ndị ọzọ. Achọpụtala ndị nabatara ya n'ezie, n'ime ụbụrụ niile. Achọpụtala ha karịsịa na sistemụ limbic, nke dị na mpaghara ụbụrụ. Na sistemụ limbic, na - achịkọta ebe nchekwa na akparamagwa na mmetụta na ihe ndị a niile, nke ahụ na - eduga n’ọrụ ndị isi, n’ihe ị ga - abụ, njirimara gị n’okwu ndị ọzọ, yana otu ị ga - esi akpa agwa.
Ya na axons ndị ahụ, nke bụ wires ị nwere ike ikwu, banyere ụlọ mkpọrọ na-agbadata na pituitary. Igwe ndị ahụ na-abanye n'ime usoro limbic. Ma ndị a abụghị wires, ndị a bụ pipụ nwere homonụ dị na ha. Yabụ na enwere ndị na-anabata ihe na anyị maara na ọkpọkọ ndị na-agba site na mkpụrụ ndụ nzuzo nke GnRH na-aga n'akụkụ akụkụ ụbụrụ ndị ọzọ, na-emetụta ya, n'ụzọ doro anya.
Ugbu a, olee otu nke a si kwekọọ n'ihe a maara banyere ihe nke GnRH n'ihe metụtara mmekọrịta nwa nwoke? Anyị ga-alaghachi n’ihe ọmụmụ anụmanụ. A mara ya ugbu a ruo oge ụfọdụ na, ọ bụrụ na ị na-atụle atụrụ, ọ bụrụ na ị hapụ ebulu, nke a bụ ụzọ ọ malitere, n'ime ìgwè atụrụ nne, nke ọma lee, lee, ha niile ga-akwa akwa, n'oge na-adịghị anya n'otu oge ahụ.
Enwere ihe gbasara nwoke a nke na-akpali akpali. Ihe mbụ ha chere bụ na pheromones, kemikal ndị e wepụtara na mmiri dị n'ahụ ya. N'ezie, pheromones rụrụ ọrụ. Kedu ka ha si arụ ọrụ? Ha na-abịa, mkpụrụ ahụ na-abata imi yana ebe mkpụrụ ndụ GnRH malitere dị ka obere, obere izu isii nwa ọhụrụ, nke ahụ bụ ebe mkpụrụ ndụ imi bidoro, ha na-agakọkwa ọnụ ma ha nwere njikọ. Yabụ, edobere na pheromones ga - eme ka mkpụrụ ndụ GnRH mepụta GnRH.
O doro anya na mmadụ chere, “Ọ dị mma, kwụ nkịtị, ọ bụ naanị isi ahụ ka ọ na-eme? Ka anyị tinye ya n'akụkụ nke ọzọ nke ngere ma hụ ihe na-eme. " Na-agagharị, ha na-elerịta ibe ha anya ma lee, ha ka na-ajụ oyi. Ha chere, “Ọ dị mma, enwere ihe mara ezigbo mma n’isi a. Anyị ga-akwụsị azụmaahịa mara mma. Anyị ga-etinye ogige gbachapụrụ agbachapụ ma hụ ihe ga-eme. ” Otu ihe ahụ mere. Ya mere na ịgagharị, ọ bụghị naanị ịnọ nso na-eme mkpọtụ, ikwu okwu ma ọ bụ abụ ọ bụla na-atọ ụtọ ma ọ bụ onye maara ihe ọ bụ, ihe gbasara ebule ahụ nwere mmetụta mmekọahụ na nne atụrụ, nke dugara ha n'echiche niile banyere mmepe mmekọrịta mmekọrịta mmadụ na nwanyị, nke nwere ihe ọ bụla jikọrọ ya na ịhụnanya. Anyị amaghị banyere otu nke ahụ si arụ ọrụ, mana enwere ozi na-abịa na ụbụrụ dị n'akụkụ na akụkụ ndị ọzọ nke ụbụrụ, na ọ na-agbadata na sistemụ limbic. Na ihe na-eme? Okwu ikpeazu biara site na GnRH. Ọ dị ọtụtụ karịa naanị otu ohere ahụ. Ọ metụtara echiche nke ịdaba n'ịhụnanya, ya mere njirimara nwoke na nwanyị na ebumnuche mmekọahụ yana echiche ịmụ nwa. Ọ kariri nke ahụ.
Ọzọkwa, gịnị ọzọ? Amaghi m otu ha siri nweta omume iji mee nke a, mana na ndi 1970 gbara GnRH ma gbapuo oghere, echere m, n'ime ụbụrụ oke ma gbanye ya n'ime oghere n'ime oghere ndị ahụ na, chaị, nke oke oke mgbe ahụ, ndị a bụ ụmụ oke akabeghị aka, chọrọ ịme mmekọahụ. Na ụmụ oke ụmụ nwanyị chọrọ ka a na-enwe mmekọahụ. Yabụ, enwere nkọwa ọzọ, dị ka akọwabeghị nkọwa, otu GnRH si abanye na ebe. Mana ha chọpụtara na enwere ebe mgbe ahụ, ebe a kapịrị ọnụ, na midbrain nke GnRH na-eme omume ma na-eme ka omume mmekọahụ dịrị.
Yabụ, enwere ihe ndị ọzọ? Ọfọn, ee, anyị na-ekwu maka iji GnRH mee ka nwatakịrị nwee ọgụgụ isi na-arụ ọrụ ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị ma ọ chọrọ ịmụ nwa. Nke ahụ bụ ihe anyị na-ekwu maka ya Anyị etinyela ya n'ọrụ site n'itinye onye mgbochi ahụ ka anyị wee hapụ azụmahịa mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze. Anyị elegharala mmetụta nke ebe a na-ahụkarị inwe mmekọahụ anya, yana igbochi gonadotropins, anyị egbochila mmetụta okike nke homonụ mmekọahụ n'onwe ha, nke na-enwe mmekọahụ ma na-akpali ma na-echekwa ma na-aga n'ihu. Nnukwu mmetụta. N’ezie, ọ bụrụ na ị bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị, ọrụ izizi nke ịtọgbọ ụbụrụ gị, enwere ihe dị iche na nwoke na nwanyị ma ya adaa ụra ruo mgbe ọ bụ oge mmadụ. Mgbe ihe ndị a niile mere iji rụọ ọrụ, a haziri ahazi, edozila, ụbụrụ nwoke ma ọ bụ nwanyị. Yabụ, anyị na-agọnahụ nwatakịrị ahụ yana mmetụta nke homonụ mmekọahụ.
Enwere ihe ọzọ? Eeh. Ihe ndị anụmanụ ahụ chọtara, ọ bụghị m, mahadum dị na Glasgow, nke jikọtara na mahadum dị na Holland, bụ na ọ bụrụ na ị nye ndị na-egbochi atụrụ atụrụ akabeghị aka, mgbe ahụ enwere mmetụta na sistemụ limbi. Karịsịa, otu akụkụ ya kpọrọ amygdala. Ihe merenụ bụ na amygdala nwere mmụba, nwee nnukwu ahụike, ma mgbe ha lere anya na mkpụrụ ndụ ihe nketa dị na ya, ọtụtụ narị mkpụrụ ndụ ihe nketa na-emebi omume ha. Gịnị ka nke a dugara? Nke a dugara na nnyonye anya na ọrụ nke sistemụ limbic ahụ nke mere na ekpughere atụrụ iji belata ncheta ogologo oge, ma bụrụkwa ndị na-eto eto, nke a bụ mmetụta na-aga n'ihu. Anyị na-ekwu ncheta oge, nke ahụ adịghị mfe, mana ịchọrọ ncheta ogologo oge, ọ bụ akụkụ nke azụmahịa nke ikpebi ihe ị bụ, ihe ị mụtara, ihe ị chọrọ ịbụ, ihe mmetụta gị gwara gị na otu ị si 'na-aga na-akpa àgwà n'usoro ndị isi ọrụ.
Yabụ, ịkwesịrị ịghọta ihe gbasara GnRH tupu ị ghọta oke arụmụka a na ọ bụrụ na ị gbochie GnRH, ị ga-ekwe ka nwatakịrị ahụ nwee ike ịghọta ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị, n'ihi na ị gbochiela ụdị okike niile usoro ga-eweta nke a, na steeti a nọ na-eche, nwatakịrị ahụ ga-anọ n'okpuru nkwado, mmetụta na-enweghị atụ nke ndị ikike ya niile na-ekwu. “Ọ dị mma, ị bụ nwa agbọghọ ma ọ bụ nwa okoro.” Ọ bụ ya mere physiology ji dị njọ. Ha na-ekwu na enweghị ihe akaebe. Enwere otutu ihe akaebe banyere nke a, ma anyị ka kwuchara banyere akụkụ a, na atụrụ.
Vidio 7 - Mmekọahụ Mmekọahụ nke Hormone Blockers - Pịa> Iji budata PDF ebe a.